စကင်းကဲတွေလိမ်းပြီး မထိရောက်ဖူး ထင်နေလား . . . ဒါဆို Nano ‌လေး ကူညီဖို့လိုနေပြီဆိုတာ ‌သေချာပါတယ်. Nano Brush ‌လေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်ရင် အ‌ရေပြားက စကင်းကဲတွေ စုတ်ယူဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်သွား‌စေပါတယ်. စကင်းကဲပြီး Nano Spray ‌လေးဖြန်းလိုက်ရင် လိမ်းထားတဲ့ စကင်းကဲတွေရဲ့ ထိရောက်မှု ၂ ဆ တိုးလာ‌စေပါတယ်. Nano Brush တစ်ခု ၁၂၀၀၀ ကျပ်. Nano Spray တစ်ခု ၁၇၀၀၀ ကျပ်.